Da'da dijitalku waa meel kasta, way sii kordhaysaa, waana isbedelka waxa suurtagal ah ee cilmi-baarayaasha.
Qaybta dhexe ee buuggani waa in da'da dijitaal ay abuurayso fursado cusub oo cilmi-baaris bulsheed. Cilmi-baadhayaashu waxay hadda ilaalin karaan dabeecada, waydiiyaan su'aalo, tijaabiyaan tijaabooyin, waxayna iska kaashadaan siyaabaha aan macquul ahayn waqtigii hore. Iyadoo la socota fursadaha cusubi waxay halis cusub u yihiin: cilmi-baarayaashu waxay hadda kufilan karaan dadka siyaabo aan suurtogal u ahayn waqtigii dhowaa. Ilaha fursadaha iyo khatartaas waa kala-guurka da'da da'da ah. Kala-guurkaasi ma uusan dhicin dhammaanba sida isbeddelka iftiinka ah-oo, run ahaantii, weli ma dhammeystirnayn. Si kastaba ha ahaatee, waxaynu aragnay wax ku filan hadda si aan u ogaano in wax weyn oo socda.
Hal hab oo lagu ogaado kala-guurkaan waa inaad raadiso isbedel ku yimaada nolol maalmeedkaaga. Waxyaabo badan oo noloshaada ah oo loo isticmaalo analogga ayaa hadda ah digital. Waxaa laga yaabaa inaad isticmaashay kamarad filim ah, laakiin hadda waxaad isticmaashaa kamarad dijital ah (oo laga yaabo in qayb ka mid ah telefoonkaaga casriga ah). Waxaa laga yaabaa inaad isticmaashay wargeyska jimicsiga, laakiin hadda waxaad akhrisey wargeyska internetka. Waxaa laga yaabaa inaad isticmaashay waxyaabo lacag caddaan ah, laakiin hadda waxaad bixineysaa kaarka deynta. Xaalad kasta, isbeddelka ka yimaada analog illaa dijitaal micnaheedu waa in xog badan oo adiga kugu saabsan lagu qabsado oo lagu kaydiyaa tiro ahaan.
Xaqiiqdii, marka la eego wadar ahaan, saameynta ku-meel-gaarnimada ayaa aad u yaaban. Qadarka macluumaadka adduunka ayaa si degdeg ah u sii kordhaya, iyo in badan oo ka mid ah macluumaadkaas waxaa lagu kaydiyaa digitallyally, taas oo fududeyneysa falanqaynta, gudbinta, iyo isku-biirinta (tirada 1.1). Dhamaan macluumaadkaan dijital ah ayaa loo soo yeeray "xog weyn". Marka lagu daro qarxinta macluumaadka dijitaalka, waxaa jira koror isku mid ah helitaanka awoodda xisaabinta (jaantuska 1.1). Isbedeladaas oo sii kordhaya ee xogta dhijitaalka ah iyo sii kordhinta helitaanka computer-waxay u badan tahay inay sii wataan mustaqbalka la filayo.
Jaantus 1.1: Awoodda kaydinta xogta iyo awoodda xisaabinta ayaa si aad ah u kordheysa. Dheeraad ah, kaydinta macluumaadka hadda waa mid si gaara u ah dijitalka. Isbeddeladani waxay abuuraan fursado cajiib ah oo loogu talagalay cilmibaareyaasha arrimaha bulshada. Waxaa laga soo qaatay Hilbert and López (2011) , tirooyinka 2 iyo 5.
Ujeedada cilmi baarista bulshada, waxaan u maleynayaa in qaabka ugu muhiimsan ee da'da dijitalku ay tahay kumbuyuutar meel kasta . Ka bilaabashada mashiinnada qolka leh ee laga heli karo oo keliya dawladaha iyo shirkadaha waaweyn, kombiyuutarada ayaa ku sii yaraatay baaxad iyo sii kordhaya. Tobankii sano ee kasta tan iyo 1980-kii waxay arkeen nooca cusub ee xisaabinta: kombiyuutarada, laptops, taleefannada casriga ah, iyo hadda hawlgalayasha ku jira "Internet of Things" (Tusaale ahaan, kombiyuutarrada ku jira qalabyada sida baabuurta, saacadaha, iyo kuleyliyaha) (Waldrop 2016) . Kordhi, kombiyutarada oo dhan waxay ka badan yihiin kaliya xisaabinta; waxay sidoo kale dareemaan, kaydiyaan, iyo gudbiyaan macluumaadka.
Cilmi-baadhayaasha, saamaynta ay ku leeyihiin joogitaanka kombiyuutarada meel kasta waa sahlan tahay in ay internetka u arkaan, jawi si buuxda loo cabbiray oo la aqbali karo tijaabinta. Tusaale ahaan, dukaanka online-ka ah ayaa si sahlan u soo uruurin kara xogta dhabta ah ee ku saabsan qaabka adeegga malaayiinta macaamiisha. Dheeraad ah, waxay si sahal ah u kala saari kartaa kooxo macaamiisha ah si ay u helaan khibrado adeeg oo kala duwan Awooddaas oo loo kala soocayo kor ku xusan waxay ka dhigan tahay in dukaamada online ay si joogto ah u kormeeraan tijaabooyinka la xakameeyey. Xaqiiqdii, haddii aad waligaa ka soo iibsatay dukaanka internetka, dabeecaddaada ayaa la daba socdey aadna hubaal ahaantii kaqaybqaatay tijaabo, haddii aad ogeyd ama aanad aqoon.
Dunida si buuxda loo cabbiray, si buuxda loo kala soocayo ma aha oo kaliya internetka; waxaa sii kordhaya meel walba. Dukaamada jirka horay waxay u soo ururiyaan macluumaad iibsi oo aad u faahfaahsan, waxayna kobcinayaan kaabayaasha si ay ula socdaan macaamiisha adeega wax iibsashada waxayna isku darsamaan tijaabinta dhaqdhaqaaq ganacsi joogta ah. "Internetka Waxyaabaha" waxaa loola jeedaa in dabeecadaha muuqaalka ah ee adduunka jireed ay sii kordhayaan sii korodhka dareemayaasha. Si kale haddii loo dhigo, marka aad ka fekereyso cilmi baarista bulshada ee da 'da' digital ah waa inaadan ka fikirin internetka , waa inaad ka fakartaa meel kasta .
Intaa waxaa dheer in ay awood u leedahay in la cabbiro habdhaqanka iyo kala soocidda daaweynta, da'da dijitaalka ayaa sidoo kale abuuray dariiqooyin cusub oo dadka loogu talagalay. Noocaan cusub ee isgaarsiinta ayaa u oggolaanaya cilmi-baarayaasha in ay sameeyaan sahammo cusub iyo inay abuuraan iskaashi ballaaran oo ay la yeeshaan asxaabtooda iyo dadweynaha guud.
Shaki ayaa laga yaabaa inay tilmaamayso inaan midkoodna awoodin kuwan cusub. Taasi waa, horeyba, waxaa jiray guulo waawayn oo dadku awood u yeeshay inay la xiriiraan (tusaale ahaan, telegraph (Gleick 2011) ), iyo kombiyuutarada ayaa si dhaqso ah u soo galaya isla heerkii isla ilaa 1960-kii (Waldrop 2016) . Laakiin waxa laga shakisan yahay shaki la'aanta waa in meel gaar ah oo ka mid ah ay isku mid noqdaan wax ka duwan. Waa kuwan isbarbar (Halevy, Norvig, and Pereira 2009; Mayer-Schönberger and Cukier 2013) . Haddii aad soo qabsan karto sawirka faras, ka dibna waxaad leedahay sawir. Iyo, haddii aad qaadi karto 24 sawir oo faras ah daqiiqad, markaa waxaad leedahay filim. Dabcan, filim waa kaliya farabadan oo sawirro ah, laakiin kaliya shaki daran ayaa sheeganeysa in sawirada iyo filimada ay isku mid yihiin.
Cilmi-baadhayaashu waxay ku jiraan geedi socodka sameynta isbeddel aan loo baahnayn ka soo wareegista sawir-siinta shaxanka. Isbedelkan, hase yeeshee, macnaheedu maaha in wax kasta oo aan hore u soo baranay la soo dhaafay. Sida mabaadi'da sawirqaadku u sheegaan kuwa cinwaanada, mabaadiida cilmi-baarista bulshada ee la soo saaray 100-kii sano ee la soo dhaafay waxay u sheegi doonaan cilmi-baarista bulsheed ee ka dhacaya 100-ka sano ee soo socda. Laakiin, isbeddelku waxa uu sidoo kale ka dhigan yahay in aynaan kaliya sii wadin wax la mid ah. Halkii, waa inaynu isku darnaa horukaca horey iyo awoodaha mustaqbalka. Tusaale ahaan, cilmi-baarista Joshua Blumenstock iyo asxaabtu waxay ahayd isku-darka cilmi-baaris dhaqameed oo la xidhiidha waxa laga yaabo inay qaar ka dhigaan sayniska xogta. Labada waxyaalood ee maaddooyinkaas waa lagama maarmaan: jawaabaha sahanka iyo diiwaanka telefoonka ee iyaga naftu waxay ku filan yihiin inay soo saaraan qiyaasta qiyaasta qiyaasta saboolnimada. Guud ahaan, cilmi baarayaasha bulshadu waxay u baahnaan doonaan in ay isku daraan fikradaha sayniska bulshada iyo sayniska si ay uga faa'iidaystaan ​​fursadaha da'da digital; kali kali kali kuma filna.